:Bọchị: Disemba 21, 2019
Conveniently, Verdi Gospel nke First Export ụgbọ okporo ígwè ga-aga site Turkey na China
Turkey, One echebe One Road Revitalization Project nke ihiwe kasị okporo ígwè ụzọ n'etiti China na Europe na-aga n'ihu kpakorita ezubere iche maka n'etiti paseji. Onye isi oche TCDD Ali İhsan Uygun [More ...]
Ozi New East Express Route
Newzọ Ọwụwa Anyanwụ Ọhụrụ: Ike East East, nke na-arụ ọrụ ma ama ama n'etiti obodo Ankara na Kars, na-abawanye. Eastern Express, nke na-enye ozi banyere oge ọpụpụ na ọnụahịa nke andgbọ njem na [More ...]
E meghere Bayirköy Mahmudiye Derebaşı Otu-ụzọ-Nke-One
Emechara site na Ordu mepere emepe n'obodo Mesudiye Bayirköy Mahmudiye Derebaşı Otu ụzọ na akwa ga-arụ ọrụ mmemme mmeghe. Onye isi obodo nke Ordu Obodo ukwu sonyere na mmemme ahụ. Kpọtụrụ Hilmi ozugbo [More ...]
İlker Başbuğ: Ekewara Thrace na abuo ma ọ bụrụ na ọwa ahụ bụ Istanbul
Onye isi ndị isi nke iri abụọ na isii nke Jenụwarị Ilker Basbug, na nyocha ya banyere ọwa Channelulul 'Channel nwere nkewa abụọ ma ọ bụrụ na Istanbul Thrace' ka o kwuru. Onye isi ndị isi 26th nke Gen. Jeneral İlker Başbuğ, Channelabe TV TV nke Habertürk rụrụ ụka [More ...]
Yenimahalle Mayor Fethi Yaşar gara nzukọ nke ndị nrụpụta ọrụ na ndị ọchụnta ego na-arụ ọrụ na mpaghara OSTİM Organised Industrial Zone. Ndị bịara ụlọ ọrụ si n'ọtụtụ mpaghara dịka nchekwa, ahụike, igwe na-ewu ụlọ wee gaa nzukọ a. [More ...]
Bosphorus na Ankara Express Ga-akwụsị na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Pamukova?
Bosphorus na Ankara Express Ga-akwụsị na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Pamukova ?; Bosphorus na Ankara Express akwụsịghị n'ọdụ ụgbọ mmiri Pamukova dị na Sakarya ma kpatara mmeghachi omume. TCDD 1st Regional Directorate Technical team in Pamukova Station [More ...]
Gondola Ozioma diri Samsun's Canik District!
Gondola Gospel to Canik District nke Samsun! Janik zutere na obi bi Hacıismail na Samsun Metropolitan Municipality Mayor Iron, "otu n'ime Turkey kasị mara mma skai lifts Anyị ga-ewu Janik," ka o kwuru. Atụmatụ “Mayor na agbata obi” nke Canik [More ...]
Onye Minista Varank Ekekọtara Onyonyo Ya n'ime Localgbọala Obodo; N'ajụjụ ọnụ ya na ndị nta akụkọ nọ na Malaysia, Prime Minista na onye ndu AKP Recep Tayyip Erdoğan kwupụtara na ha ga-ewebata ụgbọ ala mpaghara ahụ na 27 nke ọnwa Disemba. [More ...]
Companieslọ ọrụ Turkey na-achọ ikike ikike iji rụọ ọdụ ụgbọ elu Tivat na Podgorica
A na - achịkọta ihe ncheta Monteegro “Tivat na Podgorica International ọdụ ụgbọ elu afọ 30 na ikike ịrụ ọrụ”. Cengiz Construction si Turkey, TAV Holding na Limak nwere n'etiti ndị bidders. Tgbọ elu Tivat [More ...]
Yahya Kaptan Yonca Ọrụ Mkpochasị Ọkụkụ malitere
Yahya Kaptan Yonca Ọrụ Mkpokọ Ọkụ Rụpụtara; Obodo Kocaeli, nke meworo ka ebe ndị ahụ dị n'okporo ụzọ, àkwà mmiri na ebe m na-abanye ụzọ na Kocaeli, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ a. park [More ...]
TransportationPark Jikere Maka Ala Ọma Jijiji na Ọkụ
Akụkọ banyere ọgbụgba na General Directorate of TransportationPark, otu n'ime ndị otu Kocaeli Metropolitan Obodo emeghị eziokwu ọ bụla. Ala ọmajiji nke Silivri nke Istanbul Silivri bidoro na mgbatị ahụ malitere ime mkpọtụ. Sekọnd 7.1 tupu ndị ọrụ ala ọma jijiji ahụ [More ...]
Uzo Eurosia na-azoputa ihe ruru ijeri abuo
Uzo Eurasia, nke edobere n’ọrụ n’ime onwa iri-abuo nke onwa iri n’afọ 20 iji nye aka na ebumnuche njem njem n’obodo Istanbul, echekwala ihe ruru ijeri TL 2016 n’ime afọ a. Ọwara Eurasia site na December 1,2, 20 [More ...]
Abledgbọ njem TCDD nwere nkwarụ Nyocha Nnyocha Onwe Onye Ọha
Abledgbọ njem TCDD nwere nkwarụ na Nyocha Nkwupụta Onwe Onye; Nsonaazụ Nyocha Ntugharị (Nkwarụ-Ex-Convict) nke TCDD Taşımacılık A.Ş na 03.10.2019 kwupụtara. Pịa ebe a iji hụ nsonaazụ ya. Ndị mmeri na-emeri [More ...]